Sehatra ara-pahasalamana Tsy maharaka ny fitombon’ny mponina ny fivoarany
Sendikan'ny dokotera mpiasam-panjakana "Tsy afaka hanao sorona ny ainay izahay"
Naneho fiondrehana ny fiombonan’alahelo tamin'ny fahafatesan'i Dr Daniel, Lehiben'ny Tobim-pahasalamana Fototra an-drenivohitra ao Toamasina omaly tao amin'ny Hopitaly Morafeno Toamasina ny Sendikan'ny Dokotera Mpiasam-panjakana (SMédFM).
Fitsaboana nentim-paharazana Tafajora ara-dalàna ny FI.TRA.MA
Mijoro ara-dalana eto amintsika ny Fikambanan’ny Tradisionela Malagasy na ny FI.TRA.MA, miaraka amin’ny mpitsabo nentim-paharazana Rakotondranaivo Jean Pierre sy ny fikambanana HAFARI Malagasy,
Orinasa OFAFA Haverina hamokatra fanafody indray
Naverina amin’ny fanjakana ny tany sy ny toeram-piasan’ny OFAFA etsy amin’ny Zone Industrielle Forello Tanjombato,
Tambavy CVO Nilamina ny resak'i Rajoelina sy ny OMS
Nahafapo ny resaka nifanaovana tamin'ny Tale jeneralin'ny OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus izay mankasitraka ny ezak'i Madagasikara amin'ny ady ataontsika amin'ny coronavirus, hoy i Andry Rajoelina Filoham-pirenena Malagasy ny alarobia teo
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely PANORAMA Andrainarivo omaly ny mahakasika ny fanadihadiana momba ny fitombon’ny mponina sy ny fahasalamana (EDSMD) eto Madagasikara.
Mifanindry an-dalana ary tsy azo sarahana ny fampiroboroboana ny sehatra ara-pahasalamana sy ny fitombon’ny vahoaka Malagasy. Efa fanin-diminy amin’ny fanadihadiana natao eto amin’ny firenena Malagasy io hatramin’ny taona 2008. Amin’ity taona ity kosa dia handrakotra ny faritra 22 izany ary hanaovana fanadihadiana amina tokantrano miisa 21000. Hanontaniana amin’ity fanadihadiana EDSMD ity ny mahakasika ny fananana anaka sy ny fandrindram-piterahana. Eo ihany koa ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ary ireo aretina tahaka ny tazomoka, ny tsimokaretina VIH-SIDA hatramin’ireo aretina mpahazo ny tanora noho ny firaisana ara-nofo tsy voaaro. Tompon’antoka amin’ity fanadihadiana ity ny INSTAT ary vatsian’ny sampandraharaha Amerikanina misahana ny fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) vola izany miaraka amin’ny tahirin’ny firenena Mikambana momba ny mponina (FNUAP) sy ny Vondrona Iraisam-pirenena miaro ny ankizy sy ny zony (UNICEF).